Yiziphi amathuba angcono okuthola amagama angukhiye e-Amazon?
Uma uqhuba ibhizinisi lakho ku-Amazon, kubalulekile ukuqhuba ucwaningo olunzulu lwegama elingukhiye. Amazwi osesho okuhlosiwe okuwutholayo, ophakeme uzobeka kwi-Amazon SERP futhi uzothola ithrafikhi engaphezulu. Ukutshala isikhathi sakho ukuhlola amagama osesho kunazo zonke ku-niche yakho kungakhulisa amandla akho ebhizinisi futhi kuphakamise izikhundla zakho zomkhiqizo kuma-searched kakhulu ku-Amazon - partes de una camara reflex nikon. Noma kunjalo, akwanele nje ukuthola ukuthi kufanelekile emibandela yakho yokusesha ibhizinisi; nawe udinga ukuwasebenzisa ngendlela efanele. I-Amazon ikunikeza leli thuba.
Kukhona okungenani izingxenye ezintathu lapho ungafaka amagama akho angukhiye ahlosiwe - isihloko, incazelo namaphoyinti e-bullet. Zonke lezi zici zibalulekile kwamanye amandla, kodwa isici esibaluleke kakhulu nesingaphansi kokufakwa ohlwini yisihloko somkhiqizo. Unamandla amakhulu okubeka kuhlu kuhlu. Uma unegama eliyinhloko elifinyelelekile, uzokwazi ukukala imibuzo eminingi yokucinga. Cishe usho uhlu lwama-brand ngegama elide elifakiwe lemikhiqizo elinezinto ezifakiwe e-Amazon. Njengomthetho, iziqu ezinjalo ziba ngcono kuma-Amazon kunamafushane futhi afanelekile. Lapha singabona umehluko omkhulu phakathi kwezinguquko ze-Amazon ne-Google. Ngenkathi ku-Google isihloko sakho kufanele siqondile futhi sisho umqondo wakho oyinhloko webhusayithi, ku-Amazon isihloko sakho sinikeza ulwazi oluningi mayelana nomkhiqizo wakho ngangokunokwenzeka. Abasebenzisi abavumelani nemisho emide, kodwa ama-Amazon A9 algorithm angathola inani kuwo. Ngakho-ke, ngezihloko ezicebile zegama elingukhiye, imikhiqizo yakho izobe ikhokhelwe ngokwemibandela ehlukahlukene yokusesha.
Uma kunesidingo esikhulu, kuyisigamu sempi kuphela. Uma ungathanda ukufeza isikhundla esiphakeme nganoma yimiphi imigomo yokusesha okuhlosiwe, ukudayiswa kufanele kuqhutshekwe yizinhlu zokubonisa i-Amazon ukuthi uhlu lwakho lomkhiqizo luhambisana kakhulu nalawa magama okusesha. Yingakho kulesi sihloko sizoxoxa ngendlela yokwenza ucwaningo lwegama elingukhiye ngendlela efanele futhi wenze uhla lwe-Amazon luphumelele kakhulu ngangokunokwenzeka..
Ukucwaninga ngegama elingukhiye le-Amazon nokuhlelwa kokufakwa ohlwini
Ngokwemininingwane yezibalo, ingxenye yesithathu yawo yonke ukusesha komkhiqizo iqale ku-platform ye-Amazon yokuhweba. Kuyinto yesikhulumi esikhulu futhi esinokuncintisana esinezigidi zemikhiqizo ehlukene. Yingakho akuyona indawo engcono kakhulu yokubuka futhi ukuthola imikhiqizo emisha. Ukuseshwa kwe-Amazon kulindeleke imiphumela esheshayo emibhalweni enohlu lwemikhiqizo efanele futhi efanelekayo. Yingakho kubalulekile ukuvela phezulu ohlwini uma amakhasimende akho angase afune noma yikuphi ukukhuluma okuhlobene nomkhiqizo wakho.
Izimiso eziningana eziyisisekelo zingakusiza ukuthi uzibeke kakhulu emiphumeleni yokusesha ye-Amazon, kufaka phakathi ubuningi kanye nekhwalithi yokubuyekezwa kwakho, umlando wakho wokuthengisa we-Amazon, inani lamadili amahle, isilinganiso sezinkanyezi, ukwesekwa kwamakhasimende, nokuthi umkhiqizo wakho ufanele kangakanani kusekusesheni losesho. Nakuba iningi lalezi zici zidinga isikhathi nemizamo ephawulekayo, ukuhlelwa kwakho kokufakwa ohlwini kwe-Amazon kungenziwa ngokushesha ekulawuleni kwakho.
Ungayithola kanjani amagama angukhiye we-Amazon ukufakwa ohlwini kokusebenza?
Kunezindlela ezithile zokuthola amagama angukhiye ngqo okufanele uwafake kuhlu lwakho ukuze ukwandise ukuhambisana kwakho kwemibandela yosesho ejwayelekile kakhulu.
Kunezindlela ezimbili ukuthi ungaqhuba kanjani ucwaningo lwegama elingukhiye - ngesandla nangokuzenzakalelayo. Ukuhluka okugcina okusetshenziselwa kakhulu ezinsukwini zethu ngoba kusindisa isikhathi esiningi kakhulu futhi kunikeza imiphumela enembile kuncike ekucwaningeni olunzulu lwe-market niche nokuhlaziywa kokuncintisana.
Yingakho ngineluleka ukuthi ukhethe isofthiwe yokuzisebenzisela ezisebenzayo ukuze usebenzise ngokuphumelelayo umkhankaso wokuthuthukisa i-Amazon. Kusuka kumathuluzi okucwaninga angamagama angukhiye, ngiyakwazi ukubalula okulandelayo - Umhleli Wegama Lemikhiqizo ye-Google, i-Amazon Keyword Planner kanye ne-Jungle Scout.